प्रत्येक श्वासमा जोखिम, मास्क नाम मात्रैका : कस्तो माक्स लगाउने ? - Chandragiri News
Home समाज प्रत्येक श्वासमा जोखिम, मास्क नाम मात्रैका : कस्तो माक्स लगाउने ?
प्रत्येक श्वासमा जोखिम, मास्क नाम मात्रैका : कस्तो माक्स लगाउने ?
२०७४, १५ चैत्र बिहीबार १४:४३
काठमाडौं,चैत्र १५ : सामान्यतया सहर भन्नासाथ ठूलो जनसंख्या, फराकिला सडक, सफा र ठूला फुटपाथ, खुला पार्क र चौरको छवि दिमागमा आउँछ । तर, अहिले काठमाडौं आइपुग्नेले यो सहरमा अर्को एउटा विशेषता पाउनेछ, सहरवासीको मुख ढाक्ने मास्क ।
सडक विस्तार, ढल सुधार र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप जडानका लागि पछिल्लो समय गरिएको उत्खननले काठमाडौं खाल्डोलाई स-साना ‘खाल्टा’ को सहरमा परिणत गरिदिएको छ । र, यहाँको वायुमण्डललाई ‘धुलीमण्डल’ मा । त्यसमाथि पुराना गाडीले फ्याँक्ने विषाक्त धूवाँ त छँदै छ । आजको कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा समाचार छापिएको छ ।
धापासीकी ६४ वर्षीया सुशीला भट्टलाई धुलोले अरूलाई भन्दा अझ बढी समस्या थपेको छ । ९ वर्षदेखि दमले पीडित उनी बिनामास्क घरबाट बाहिर निस्कनै सक्दिनन् । ‘बाहिर निस्कियो कि खोकी लाग्न थाल्छ,’ उनले सुनाइन्, ‘४ वर्षदेखि मास्क लगाउँछु तर यसले पनि धुलो छेक्न छाडेको छ ।’ उनी काठमाडौं आएको २८ वर्ष भयो । ‘पहिला त यस्तो थिएन,’ वीर अस्पतालमा भेटिएकी उनले गुनासो गरिन्, ‘मास्क नलगाई त कतै हिँड्नै सक्दिनँ, काठमाडौंमा मान्छेभन्दा धेरै गाडी, मोटरसाइकल छन्, जताततै धुलो र धूवाँ मात्र छ, म दमको रोगीलाई धुलोधूवाँले भेटेपछि के चाहियो ? पीडा सहेर खोक्नुपरेको छ ।’
जब काठमाडौंमा धुलोको ‘जगजगी’ सुरु भयो, एकातिर अस्पतालहरूमा छाला, नाक, कान र घाँटीका बिरामीको चाप बढदै गयो भने अर्कातिर मास्कको व्यापार पनि बढ्न थाल्यो । अहिले फुटपाथदेखि औषधि पसलसम्म मास्कको राम्रो व्यापार हुने गरेको छ । औषधि पसल मात्र होइन, फुटपाथका खुद्रा पसल र फलफूल पसलहरूमा समेत अहिले मास्क बिक्री गरिन्छ ।
पछिल्लो समय धुलोकै कारण नाक, कान, घाँटी, फोक्सो र छालाका बिरामी बढेको चिकित्सक बताउँछन् । बजारमा पाइने अधिकांश मास्कले धुलो र धूवाँका हानिकारक कण नछेक्ने उनीहरूको दाबी छ । वीर अस्पतालका नाक, कान, घाँटी विभाग प्रमुख प्राध्यापक डा. ढुण्डीराज पौडेल बजारमा दुई किसिमका मास्क पाइनेमा मेडिकेटेड मास्कले मात्र आंशिक रूपमा फाइदा गर्ने बताउँछन् । ‘औषधियुक्त मेडिकेटेड मास्कले आंशिक रूपमा सुरक्षा दिन्छ,’ उनले भने, ‘मास्कले धुलो धूवाँका ठूला कणबाट जोगाए पनि साना कण सिधै फोक्सोमा पुग्छन् ।’ साना कणले नै बढी हानि गर्ने जानकारी दिँदै उनले भने, ‘मास्क लगाएको छु, किटाणुबाट जोगिएको छु भनेर ढुक्क हुन सकिन्न ।’
डा. पौडेलका अनुसार धुलोधूवाँले बाल, वृद्ध, गर्भवती, पुरानो दम र टीबीका रोगी, रोगविरुद्ध लड्ने क्षमता कमजोर रहेका दीर्घरोगी र चुरोट बढी पिउनेलाई बढी सताउँछ । यस्ता व्यक्तिलाई पटक–पटक रुघाखोकी लागिरहने, पिनास हुने, घाँटी र कानको संक्रमण हुने, दम, निमोनियाँ हुने सम्भावना बढाइदिन्छ धुलोधूवाँले । उनका अनुसार वीर अस्पतालमा धुलोकै कारण नाक, कान, घाँटीका बिरामी २० प्रतिशतले बढेका छन् ।
कस्तो माक्स लगाउने त ?
धुलोधूवाँका कारण निम्तने समस्याबाट बच्न कस्तो माक्स लगाउने त ? गुणस्तरीय एउटा मास्क एक दिन मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने पौडेल सुझाउँछन् । अघिल्लो दिन प्रयोग गरेको कपडाको मास्क भोलिपल्ट पनि दोहोर्‍याउन राम्रोसँग निर्मलीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र त्यहीँ किटाणु थिग्रिएर बस्छ, उल्टै रोग बढाउँछ । मास्क लगाउँदा हाछ्युँ आएको छ भने फेरि प्रयोग गर्दा त्यही किटाणु फैलिन्छ ।’
Previous articleस्थानीय तहले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने
Next articleबाद भन्ज्यांगमा फुटबल मैदान निर्माण कार्य हुदै!!!